Vashandisi veGalaxy Note 7 vachagara kuSamsung | IPhone nhau
Vashandisi veGlass Note 7 vanogara kuSamsung nekuda kwekushayikwa kwemashoko "asingadzivisike" mu iPhone 7
Mushure mematambudziko eGlass Note 7 nemabhatiri ayo anotsva, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti iyo iPhone 7 ndiyo ichave nzvimbo yevashandisi vasingafare neye South Korea brand. Asi muongorori Stephen Baker haabvumirani neizvi uye anotenda izvo Cherekedza vashandisi vanomwe vacharamba vakavimbika kune Samsung, pamwe nekuda kweiyo yepamusoro basa "wow" mune dzichangoburwa mafoni efoni yekurumwa.
Sekureva kwaBaker, «Vazhinji veavo vakatenga kana kuda kutenga Chinyorwa 7 vakasarudza imwe yepamusoro-yekupedzisira Galaxy foni. Samsung yakakwanisa kusangana nemimwe makwikwi kubva kuApple, uye zvakare kubva kuApple, nekuda kwekushayikwa kwayo kwe 'wow athari' zvigadzirwa gore rino.«. Uye isu tinofanirwa kuyeuka kuti inonyanya kukosha ruzivo rweiyo nyowani iPhone ndeye iPhone 7 Plus mbiri kamera kuti panguva ino "chete", mumakotesheni makwikwi, anotibvumidza isu kutora mifananidzo ine yakakurumbira portrait kana "bokeh" mhedzisiro.
Samsung haizorasi Cherekedza 7 vashandisi
Kune rimwe divi, muongorori Chetan Sharma anobvumirana nemaonero aBaker uye anotaura nezvekushayikwa kwe «kumanikidza zvakakwana ficha yakatarwa»Yeiyo iPhone 7, iyo yakaita iyo nyowani Apple smartphone haina kupa zvakakwana kugonesa Cherechedzo varidzi kuti vakashandura ecosystems:
Apple ine yakasimba kwazvo ecosystem, ine Hardware yayo, software, uye App uye zvemukati zvitoro. Vashandisi veIphone vari kutsvaga kugadzirisa kuchavachengeta paApple. Asi mune gore umo Samsung yakadonhedza bhora mune inoshamisira fashoni, Apple haina kunge iine foni ine inomanikidza yakakwana ficha yakagadzirirwa kuisa kune varidzi veSamsung.
Vaongorori vaviri vanovimbisa izvozvo vese Apple neSamsung vakanganisa gore rino izvo zvinozovatorera kumwe kukura. Zvinoenderana naSharma, «Iyo nguva ingadai isina kuve yakanyanya kuipa kune Samsung kana zvirinani kune Apple, asi chokwadi ndechekuti hapana kambani yakwanisa kutora mari gore rino".
Mune mawonero angu, rombo rakanaka iro Samsung rave naro muna 2016 nderekuti Apple iri kumirira 2017 kuti ipe chimwe chinhu chakakosha kutora mukana wechigumi cheye iPhone. Kana vakasunungura izvo isu tese tinotarisira, iyo iPhone 2017 chichava chinongedzo icho vashoma vanozokwanisa kufukidza. Ndinovimba hazvinyadzise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Vashandisi veGlass Note 7 vanogara kuSamsung nekuda kwekushayikwa kwemashoko "asingadzivisike" mu iPhone 7
"Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti iyo iPhone 7 ndiyo ichave iri kuenda kwevashandisi veGreen note 7". Makuhwa uye mamwe makuhwa. Kunyengera sei. Nenyaya idzi ndinofungidzira. Izvo ndaizviziva. Uyo akajairwa kuve neayo android nerusununguko rwese rwaanokupa, kuti iwe unogona kuita chero chaunoda nefoni, ari kuzobatwa uye hapana chakaderera pane iyo iPhone 7 ine matambudziko ese aanopa…. Kutanga.
Pasina 3,5 jack, tenga airpots e € 179
Slow ndangariro mu32gb
Iyo inogaya nyore jet nhema, Kumhanya kunomhanya kunoisa chifukidziro.
Iwe unorekodha mavhidhiyo uye izwi richizevezera.
Iyo izere simba Silva processor.
Uye zvinhu zvisingazive zvichazobuda.
Isu takanga tisiri kuzvitaura. Vaongorori vakazvitaura.
Wistron ajoina cheni yekugadzira yeramangwana iPhone 8